Oyi kpọnwụrụ Dragonspin mpaghara maka Genshin Mmetụta mbipute 1.2 | Gam akporosis
A ga-emelite Mmetụta Genshin na mpaghara 'Dragonthorn' ọhụrụ, ebe a na-ajụ oyi na ndị dike ọhụrụ 2
Mgbe ị bụbiga mmanya ókè nke 25 kacha mma gam akporo egwuregwu nke 2020 na 25 Ọtụtụ egwuregwu dị jụụ nke 2020, na Genshin Impact nyere nke abụọ kachasị mma nke egwuregwu n'afọ, ọ ga-enweta mbipute 1.2 n'oge na-adịghị anya site na iji maapụ mpaghara ọhụrụ, 2 ndị dike ọhụrụ na ndị ọzọ.
Egwuregwu magburu onwe ya a gbagwojuru anya site na oke mma ọ dị egwu na n’ihi etu o si dị mma na ekwentị anyị. Anyị nwere ụbọchị maka mmelite ọhụụ ọ gaghị abụ ihe gbasara ụbọchị 10 mgbe anyị nwere ike imelite egwuregwu kachasị amasị anyị.
Ga-abụ Disemba 23 mgbe miYoHo ga-ewepu mmelite ya na Playlọ Ahịa Google ka anyị wee nwee ike ịnata nsụgharị 1.2 nke Genshin Impact. Akpọrọ mmelite a "The Chalk Prince na Dragon" ma ga-enwe mpaghara ọhụrụ maka eserese a na-akpọ Dragon Spin, ugwu oyi na-atụ n'ebe ndịda nke Mondstadt.
Dragonspine ga-abụ ebe obibi nye ihe ndị e kere eke yanakwa ọhụụ ọhụụ, ihe ochie dị iche iche, akwụkwọ nri 4-star, na ndị ọzọ; Yabụ, ihe niile anyị chọrọ na mmelite na nke ahụ na-aga n'ihu na-egosi oke mma nke aha a maka gam akporo.
Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ snowy apụtaghị na anyị ga-anọ na ogige Krismas ekeresimesi, mana na a ọhụrụ jụrụ mmanya nke ga-amanye anyị ịchọta ụzọ iji kpoo ahụ ọkụ.
E wezụga na anyị nwekwara ememme ọhụrụ nke oge a bụ Prince Chalk na Dragọn ahụ ndị ga-anabata Albedo, Chief Alchemist, onye ga-akpali anyị inyocha mma agha dị omimi na ike ọhụrụ.
una mmelite ohuru nke Genshin Impact na mbipute 1.2 nke ga - ewetakwa agwa ọhụụ 5 ọhụrụ: Albedo na Ganyu. Ugbu a, anyị ga-echere mmelite a nke ga-eweta ya na kpụkọrọ akpụkọ nke ga-amanye anyị ịchọ ụfọdụ emba iji kpoo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » A ga-emelite Mmetụta Genshin na mpaghara 'Dragonthorn' ọhụrụ, ebe a na-ajụ oyi na ndị dike ọhụrụ 2
Ekwentị nwere batrị 6000 mAh ma ọ bụ karịa
New video nke Galaxy S21 na-egosi na ya mkpa bezels na ewepụghị ihuenyo